Olee otú Iji Mee Friends Na Iju New Parts Of The World | Save A Train
Book A Train Ticket UGBU A
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Mee Friends Na Iju New Parts Of The World
site Liam Cartwright 30/11/2019
(Emelitere ikpeazụ On: 24/02/2020)
Ejegharị ejegharị na-dị iche iche nke ụwa naanị nwere ike ịbụ onye na-enye ihe ọmụma na-akpali akpali ahụmahụ. Ma ọ bụ ihe ị na-eme oge nile, ma ọ bụ a otu ugboro na a ndụ njem mụbaa gị horizons, njem nwere ike ịgbanwe ndụ gị.
Ọtụtụ mmadụ na ụbọchị ndị a na-ahọrọ na njem naanị, ae ji nnwere onwe dị otú ahụ otu ahụmahụ na-enye. LifeHack -akọwa ihe mere na ọ ghọọ ndị dị otú ahụ a na-ewu ewu usoro nke ịhụ ụwa na-adịbeghị anya.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem naanị, akụkụ nke njem na-ihe ọhụrụ ndị mmadụ, mgbe ndị dị nnọọ iche na onwe gị, ma ha nile ga-Olileanya eme n'ozuzu njem na njem.
Ya mere, ka na-elerukwu anya na ụfọdụ ụzọ dị iche iche i nwere ike izute ndị mmadụ na ọhụrụ akụkụ nke ụwa.
Ebe klọb bụ ihe doro anya oke, The Guardian na-atụ aro na ha na-ada ada nke ihu ọma Millennials. Live music na-aghọ nnọọ ihe na-ewu ewu, na oge na n'etiti tent ịnụ onwe gị na-eche ma na-eme ọhụrụ ọkọfiọkde.
E nwere ọtụtụ oké hip Ogwe gafee Europe maka ndị na-achọ ime njem gburugburu amasị nke Paris, Luxembourg, na London, niile zuru okè n'ihi na ihe ọzọ mmadụ ọhụrụ na gị njem.
Na A cha cha
Egwu na-akpọ egosighị mmetụta bụ a oké ụzọ izute ọhụrụ ndị mmadụ, dị ka ị na-na na na gburugburu a table-achọ ịghọta gị iro. Ị na-amụ ha, egwuregwu na ha na Mee agbụ nke i nwere ike wepụ ya n'ime gị njem.
Otu n'ime abamuru nke na-akpọ egosighị mmetụta bụ na ọ dị mfe na-amụta, pụtara ọbụna a novice nwere ike ịtụtụrụ ya ngwa ngwa iji dị ka a ụzọ ihe ọhụrụ ndị mmadụ. The kaadị ụlọ akwụkwọ na Partypoker enye mmụta na Texas Holdem maka ndị na-enweghị ka ọ bụla na ahụmahụ na egwuregwu.
All gị mkpa ugbu a bụ ịchọta a cha cha, nke e nwere ọtụtụ gafee ụwa àjà ohere na-emekọ ihe na-amabughị, bụghị naanị maka njem ma obodo nakwa.
'Part nke fun na-na-e'; otú ọtụtụ ugboro ị na-nụrụ na na a ogologo njem? Ebe njem nanị, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ziri ezi.
E nwere ụfọdụ ebube ụgbọ okporo ígwè njem na e nwere ike iwere na Europe, agafe ụfọdụ ihe ndị kasị mma ebe Afrika nwere na-enye. Ebe ị bụ na a ụgbọ okporo ígwè, ọzọ dị ka kpọrọ ndị mmadụ ga di n'ebe ahụ.
Ọ bụ a oké ụzọ izute ndị si n'agbụrụ dị iche iche, obodo ejegharị ejegharị na-na ọrụ, ndị njem ndị ọzọ na ha njem na ikekwe ọbụna onye ị na ejedebe na-ekere òkè gị ụfọdụ ahụmahụ.
Sport bụ dị ka ukwuu a njegharị mma ụbọchị ndị a dị ka ọ bụ ihe maka obodo na-enwe. Ma ọ bụ a njem nke a ámá egwuregwu ma ọ bụ ohere iji na a na-ebi ndụ omume, ọ bụ a oké ụzọ nke imbuing onwe gị na omenala ebe.
Ikekwe buru na a nte egwuregwu na Asia, ma ọ bụ anya na-eso gị gburugburu Euro 2020 nke Sky Sports akọwa bụ n'ihi na-ebe dị iche iche na obodo gburugburu Europe. Enwere ọtụtụ puku ihe gafee ụwa ụbọchị ọ bụla na-enye gị ohere iji izute ụfọdụ ọhụrụ ndị mmadụ na njem gị.
Ị dị njikere njem na-eme ka enyi na iju ọhụrụ akụkụ nke ụwa? Save A Train-enyere gị aka Book A Train mfe na cheaply.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Kasị Beautiful Medieval obodo na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-make-friends-in-strange-new-parts-of-the-world/ – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / nl na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#enyi #worldtravel strangeplaces traveltips
Liam Cartwright bụ a ejechi akwụkwọ edemede na globetrotter onye raara ndụ ya nye na ịga ọhụrụ ebe na ihe ọhụrụ ndị mmadụ. dị ka a (ukwuu n'ime) solo njem ọ na-aghọta na ihe isi ike nke ịbụ na a mba ọhụrụ na ọ maghị onye ọ bụla. Ọ na-enwe olileanya na ya isiokwu ga-enye ezi Atụmatụ na otú na-adị ndụ dị ka a solo nchoputa na zuko ndị njem ibe. Mgbe ọ na-ịgagharị ọhụrụ mba ọ pụrụ ịchọta n'ụlọ na a njem akwụkwọ echiche banyere ya ọzọ njem. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Train Travel Holland, Train njem Italy, Train njem Luxembourg, Train njem Scotland, Train njem UK, Travel Europe
Business Travel site Train, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Feb 2020Mar 2020Apr 2020Ka 2020Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021